Ipholi Yesikhwama Esipholile | I-china Cooler Bag Abakhiqizi, Abahlinzeki
IVelcro gold non woven insulated insulated lunch cooler bag, ice bag with film for freezing food and lunch.I-Velcro igolide engalukiwe epholile ingxowa yesidlo sasemini, isikhwama seqhwa nefilimu yokuqandisa ukudla nesidlo sasemini
1.Okuqukethwe: Okungalukiwe, nokwelukiweyo, i-polyester, noma okwenziwe ngezifiso;
2. Usayizi: 4inch, 6inch 8inch 10inch, 12inch, usayizi owenziwe ngezifiso;
3. Umbala: Igolide / Isiliva / Mnyama / Mhlophe / Luhlaza okwesibhakabhaka noma imibala ye-CMYK iyatholakala;
4. Ukwenza: Ukuthunga, okwenziwe ngabantu;
5. Izesekeli: I-Velcro, i-Zipper, i-strap strap;
6. Ukuphrinta: ukuphrinta kwesilika kasilika, ucwecwe lwe-bronzing nokuphrinta kokudlulisa ukushisa, Ukuphrinta kwe-Thermal sublimation, Ukuphrinta Kwedijithali, njll.
7.I-membrane eyakhiwe engenamanzi impahla, umphumela ongcono wokungena amanzi, ukuhlanza okulula kakhulu;
8. I-Aluminium film liner: ifilimu ye-aluminium esezingeni eliphakeme, evalwe ngokuqinile, ukushisa okungcono nomphumela wokubandayo wokubanda, ukulondolozwa okuhlala njalo;
9. Ukuthwala umthwalo omuhle: i-suture yezandla ingathwala izimpahla ngaphakathi kwe-5- 10kg;
IVelcro Portable Ice Pack Ukudla Isikhwama Esishisayo Ukulethwa Kwesiphuzo Isithwali Sokuthwala Isikhwama Esimnyama
1. Indwangu engenamanzi: izinto zokwakhiwa kolwelwesi olungena manzi, umphumela onamanzi ongcono, ukuhlanza okulula kakhulu;
2. I-Aluminium film liner: ifilimu ye-aluminium esezingeni eliphakeme, evalwe ngokuqinile, ukushisa okungcono nomphumela wokubandayo wokubanda, ukulondolozwa okuhlala njalo;
3. Ukuthwala umthwalo omuhle: i-suture yezandla ingathwala izimpahla ngaphakathi kwe-10kg;
I-Picnic Ice Pack Ukulethwa Okushisayo Okuphuzwayo Isithwali Isithwali esingalukanga esivikela isikhwama sasemini esipholile
3. Umbala: Igolide noma imibala ye-CMYK iyatholakala;
7. Umphumela wokushisa nokushisa, ukulondolozwa okuhlala njalo;
Uziphu obomvu wokugcina ukushisa kwesikhwama ikhekhe kanye nezithelo ezipholile esikhwameni sokugcina isikhwama
1. Usayizi kungenziwa egcizelele by amaklayenti izimfuno siqu;
2. Izinto ezahlukahlukene nemibala ehlukile kungakhethwa ngokuya ngezicelo zeklayenti;
3. Umklamo wangokwezifiso noma iphethini yokuphrinta yangokwezifiso;
4. Isampula ingahlelwa ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi;
5. Singakunika imininingwane yekhotheshini ukuze uyisebenzise kusengaphambili;
IVelcro silver non woven insulated cooler bag big ice bag with aluminium film for frozen lunch and lunch.I-Velcro silver non woven insulated cooler bag big ice bag nge-aluminium ifilimu yokudla okubandayo nesidlo sasemini
3. Umbala: Umbala weSiliva / umbala wegolide noma imibala ye-CMYK iyatholakala;
Indwangu ye-uziphu yendwangu engalukiwe isikhwama esishisayo ikhekhe eliqandisini likhipha isikhwama esipholile
1.Gold Metallic Cooler Bag, use for Frozen Seafood, food keep fresh;
2.Okuqukethwe: I-80gsm laminated nonwoven + foam foam + aluminium PVC foil;
3. Usayizi: 37cm * 40cm * 25cm noma usayizi wangokwezifiso;
4. Izindlela zokuphrinta Ukuphrinta kwesilika kwesikrini, ukuphrinta kokudlulisa ukushisa, islimiyamu;
5. Isici: Ukuvimbela, kulula ukukuphatha, okunobungane;
I-Velcro Cooler Bag Folding Insulation Enkulu Ephathekayo Amanzi Isidlo Sasemini Ipikiniki Iphakethe Ukudla Thermal Isikhwama Tote
1.Izinto: Indwangu engenalukhuni, indwangu ephothiwe, i-polyester, noma eyenziwe ngezifiso;
3. Umbala: Imibala ye-PMS noma ye-CMYK iyatholakala;
Uziphu Royal Blue camera non-nokwelukiweyo ukwahlukanisa isikhwama ephathekayo Non Nokwelukiweyo Ice Cooler Bag ngci
Izinto: Izinto Ezingalukiwe, I-Polyester 420D, 600D, 840D, 1680D, Indwangu Ye-RPET, njll.
2. Isici: Okusebenzisekayo, okunobungane, okunokuphinda kusetshenziswe, okungavuselelwa kabusha;
3. Nikeza isampula yamahhala, usayizi owenziwe ngokwezifiso ne-logo kuyenzeka;
Isikhathi sesikhathi sokuhola: Izinsuku eziyi-10-30 kusisekelo sakho, ngemuva kokuvunywa kwesampula nokutholwa kwediphozithi;
5. I-OEM ne-ODM yamukelekile
I-Velcro engeyona ephothiwe yokulethwa kokudla kwasemini isikhwama esipholile nokuphrinta kwe-logo
3. Umbala: Mnyama / Mhlophe / Bomvu / Luhlaza / Pinki noma imibala ye-CMYK iyatholakala;
7. Ukuthwala okuhle: i-suture yezandla ingathwala izimpahla ngaphakathi kwe-5- 10kg;